Asi nekuuya kwenzanga dzemagariro, mabhodhi ehurukuro, Twitter, uye Youtube matafura achinja. Vhidhiyo iri pazasi ndeimwe yemienzaniso yangu yandaifarira yemutengi anoshandisa simba rake. United Airlines yakakuvadza gitare muimbi Dave Carroll. Mushure memwedzi mipfumbamwe yekutsvaga muripo, akasiya. Akanyora rwiyo uye akagadzira vhidhiyo yakaonekwa kanopfuura mamirioni makumi manomwe nenomwe. Nezviyero makumi mana nezvisere nemakumi maviri neshanu akange achikwanisa kusvika shamwari dzinopfuura shoma, achiratidza shanduko muyero yesimba kumutengi.
'Saka United Airlines inofanira kuitei? Ko kambani hombe inoshandisa sei vezvenhau kupindura? Pakangoburitswa vhidhiyo iyo $ 1,200 ingadai yakaita kuti dambudziko ripere mwedzi mitanhatu yapfuura, yakanga isina kukwana. Sekutsanangura kunoita Mr. Carroll: Ini ndamboitwa ndakatsamwa kwenguva yakati rebei uye, kana paine chinhu, ndinofanira kutenda United. Vakandipa yekugadzira yekudyira iyo yakaunza vanhu pamwechete kubva kutenderera pasirese.